Iinkqubo ezi-5 ze-MBA ezikwi-Intanethi eziya kuqhubela phambili uKhetho loMsebenzi wakho - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Ezona nkqubo ziPhambili ze-MBA ezikwi-Intanethi kwi2021
Okwesibini ujonga iithegi zamaxabiso kwiinkqubo ze-Intanethi zoLawulo lwezoShishino kwi-Intanethi, kunokwenzeka ukuba ucinge into enye: ngaba oku kufanelekile ngokwenene? Ezona nkqubo zibalaseleyo ze-MBA ezikwi-Intanethi zibonelela ngeekharityhulamu ezigqwesileyo, amathuba okunxibelelana, kunye nemivuzo enokubakho.
Kule nqaku, ndiza kujonga ngokukhawuleza izinto ezenza inkqubo efanelekileyo ye-MBA ye-intanethi kubafundi-kunye neenkqubo ezihlangabezana nale migaqo.
Gcina ukhumbula ukuba neenkqubo eziphambili aziyi kuba ngumdlalo olungileyo kumntu wonke. Ukukunceda uthathe isigqibo, ndichazile izinto ezilungileyo nezingalunganga zesikolo ngasinye.
Iinkqubo ze-MBA eziphezulu kwi-Intanethi: Jonga kuqala
Eyona nkqubo ye-MBA kwi-Intanethi iyonke - IYunivesithi yaseIndiana yeYunivesithi yaseKelley yezoShishino kwi-MBA
Esona sidanga se-MBA sihambileyo- IYunivesithi yaseCarnegie Mellon yeYunivesithi yaseTepper yeShishini
Eyona kharityhulam yesikolo ye-MBA ekwi-Intanethi IYunivesithi yaseNorth Carolina eChapel Hill yeKenan-Flagler yeSikolo seShishini
Inkxaso yobuchule obugqwesileyo kwikhosi ye-MBA ekwi-Intanethi- IYunivesithi yaseSouth California Marshall School of Business
Eyona nkqubo ikhawulezayo ye-MBA ekwi-Intanethi - IYunivesithi yaseFlorida iHough Graduate School yeShishini
1. IYunivesithi yaseIndiana yeYunivesithi yaseKelley yezoShishino kwi-MBA -Iyona nkqubo ye-MBA kwi-Intanethi iJikelele
Izinga eliphezulu lokunyusa
Isifundo esiphantsi kakhulu
Umgangatho wobudala ophakamileyo wabafundi
Iqela elikhulu le-Intanethi
Umyinge weenyanga ezingama-48 ukugqiba
Ukuhlala ngokungqinelana phezulu kuluhlu lweenkqubo ze-MBA ezikwi-Intanethi, inkqubo yeDyunivesithi yaseIndiana ifanelwe yindawo yayo ngenqanaba lendleko. Izifundo kunye nemirhumo iyonke kwi- $ 74,520, ibiza abafundi malunga nesiqingatha seenkqubo ezilinganayo. Ngeli xesha, umvuzo ophakathi ophakathi wokuthweswa isidanga kwiYunivesithi yase-Indiana yi- $ 121,000.
Nangona ukubhaliswa kwi-Intanethi kuphezulu kunezinye iinkqubo ezikwi-Intanethi, iYunivesithi yaseIndiana iqinisekisa ukuba abafundi abakwi-MBA abakwi-Intanethi bafumana imfundo efanelekileyo ngobuchule babo kwi-Intanethi. Isidanga sithatha abafundi iinyanga ezingama-24-48 ukugqiba kwaye kubandakanya iipesenti ezingama-50 zokukhetha.
Ubungqina obungakumbi bokusebenza kweYunivesithi yaseIndiana? I-64% yabafundi be-MBA University ye-MBA bayakhuthazwa nokuba besesikolweni okanye kwiinyanga ezintandathu zokuthweswa isidanga.
Mbini. IYunivesithi yaseCarnegie Mellon yeYunivesithi yaseTepper yeShishini -Iyona MBA ilungileyo yeHybrid ekwi-Intanethi
Iqela elincinci kakhulu
Izibuko ekufundeni komntu
Iinketho zokudlulisa ezilula
Zimbalwa izinto ezikhethiweyo
Izifundo eziphakamileyo kunye neefizi
Ukubonelela ngobukhulu beeklasi ezincinci, inkqubo yeYunivesithi yaseCarnegie Mellon inika iqela elincinci, elikhethiweyo labafundi: kuphela i-125. Nangona kunjalo, aba bafundi bayazuza kwifomathi eyahlukileyo. Baza kuthatha zombini iiklasi zokuphila ezimbini ubusuku ngeveki, iiklasi ezinomdla xa kufanelekile, kwaye badibana nomntu izihlandlo ezithandathu ngonyaka kwilizwe liphela.
Ngokubanzi, le nkqubo ithatha abafundi iinyanga ezingama-32 ukugqiba kunye neendleko ze- $ 141,320.
Isikolo seYunivesithi yaseCarnegie Mellon yeShishini sisebenzisa ikharityhulamu efanayo eqhutywa yi-STEM, egxile kwi-analytics nakwidatha, eyenziwa yinkqubo yesikolo somntu. Oku kunciphisa ukhetho lokukhetha lwabafundi. Nangona kunjalo, abafundi banethuba lokutshintshela kwinkqubo yomntu eyunivesithi ngokulula.
3. IYunivesithi yaseNorth Carolina eChapel Hill yeKenan-Flagler yeSikolo seShishini -Eyona Kharityhulamu yesiDanga se-MBA egqibeleleyo
Umvuzo wokuqala ophezulu
Phila kwigumbi lokufundela
Iimfuno zeeyure eziphezulu zekhredithi
Ifuna iiyure ezingama-62 zokuthenga ngetyala kwezifundo ezihambelanayo kunye ne-asynchronous, iYunivesithi yaseNorth Carolina yeSikolo seShishini inemigangatho ephezulu. Ngaphakathi kwezi yure, nangona kunjalo, abafundi bayakwazi ukuthatha kungekuphela iikhosi eziphambili kodwa kunye nezinto ezininzi ezikhethiweyo, iiprojekthi zokufunda ezizimeleyo, kunye neeklasi zoxinzelelo.
Uninzi lwabafundi bagqibezela iYunivesithi yaseNorth Carolina kwi-MBA kwi-24 yeenyanga, kodwa uya kuba nokukhetha ukucwangcisa iiklasi ezininzi okanye ezimbalwa kwisemester nganye yokugqiba kwi-18 okanye kwiinyanga ze-36 endaweni yoko.
Ithegi yentengo yeDyunivesithi yaseNyakatho Carolina kwinkqubo ye-Intanethi ikwicala eliphezulu, kwi- $ 125,589. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ulungelelanise oku ngokuchasene nomvuzo wakho emva kokugqiba isikolo. Isidanga seKenan-Flagler sinomyinge wokuqala wokufumana umvuzo we-134,235 ye- $!
Zine. IYunivesithi yaseSouth California Marshall School of Business -Eyona nkxaso yeFakhalthi eFanelekileyo kwi-MBA ekwi-Intanethi
Umndilili ophezulu wokuqalisa umvuzo
Ngokubhaliswa kwi-Intanethi kwe-178 kuphela, abafundi beDyunivesithi yaseMazantsi eCalifornia baxhamla koonjingalwazi abafanayo njengabo bantu base-USC. Kwiinyanga ezingama-21 umfundi oqhelekileyo athabatha ukugqiba isidanga, baya kuba nokufikelela kubaphathiswa ababandakanyekayo, abafumanekayo kwiifowuni kunye neentlanganiso ze-1-on-1.
Olunye uncedo lweeklasi zeDyunivesithi yaseMazantsi eCalifornia kukuba banikezela abafundi kugxilwe kwizifundo ezahlukeneyo. Oku kuqinisekisa ukuba abafundi banokusebenzisa ulwazi lwabo kwicandelo labo lobungcali, nokuba yintoni na.
Ngelixa izifundo kwiDyunivesithi yaseSouth California iphakame kakhulu, kwi- $ 109,428, abafundi abanokubakho kufuneka balinganise oku xa kuthelekiswa nomvuzo ophakathi wokufumana izidanga: $ 189,154. Le yeyona nto iphakamileyo kuyo nayiphi na inkqubo ye-MBA ephezulu.
5. IYunivesithi yaseFlorida iHough Graduate School yeShishini -INkqubo ye-MBA ekhawulezileyo ekwi-Intanethi
Inkqubo ye-MBA efikelelekayo
Umvuzo ophakamileyo wokuqala
12- kunye neenyanga ezingama-24 ongakhetha kuzo
Umthwalo ophezulu wokusebenza ngokukhawuleza
Iindawo zokuhlala ezifunekayo ngeempelaveki
Ukunyuka ngokukhawuleza kuluhlu lweenkqubo zeshishini eziphezulu kwi-Intanethi, iYunivesithi yaseFlorida ibonelela abafundi ngexabiso eliphantsi ($ 59,807) kunye nomvuzo ophakathi ophakathi ($ 150,505).
Ngaphandle kwezibalo zayo, nangona kunjalo, isikolo sityala imali kwikamva laso ngokunika abafundi izibonelelo zokufunda ngokubanzi kunye noncedo lwezezimali, olunqabileyo phakathi kweenkqubo ze-intanethi ze-MBA. Olu ncedo lwezezimali lungenza wonke umahluko kubafundi kuhlalutyo lweendleko zokuzalisa i-MBA ekwi-Intanethi.
IYunivesithi yaseFlorida ikwanciphisa ixesha lotyalomali abafundi ekufuneka belenzile ngokwenza konke ngokukhawulezisa inkqubo yeenyanga ezili-12. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba iiklasi zakho kunye nezabelo ziya kubakho kwi-intanethi, abafundi kusafuneka beze ekhampasi rhoqo kwiinyanga ezine zokuhlala kweempelaveki.
Ukukhetha eyona MBA ikwi-Intanethi: FAQ
Yintoni iNkqubo ye-MBA ekwi-Intanethi?
I-MBA yi-Master of Business Administration. Ngamanye amagama, yinkqubo yenkosi egxile ekwakhiweni kwezakhono kunye namathuba kwabo bakushishino. Ukufaka isicelo, abafundi abanokubakho badinga isidanga sokuqala okanye amava alinganayo omsebenzi.
Ngenxa yobume bedigri, uninzi lweenkqubo zeshishini azibamkeli abafundi ngokukhawuleza ukuphuma kwikholeji. Endaweni yokuba, iinkqubo ziyilelwe iingcali zeshishini ezinamava. Bafuna ukuba abafundi babe neminyaka eliqela yamava omsebenzi phantsi kweebhanti zabo ukuze baxhamle kwizifundo zamatyala kunye neendlela abazakufunda kule nkqubo.
Ngelixa iinkqubo zeshishini ngokwesiko zazifuna uvavanyo lwe-GMAT lokwamkelwa, ezinye ziya zisibavumela abafundi ukuba bangenise i-GRE endaweni yoko. Uninzi lwee-MBAs ezikwi-Intanethi, kuya kufuneka uphinde ungenise imibhalo yakho kwisikolo sakho sokuqala, iileta zengcebiso, kunye nezincoko.
Iinkqubo ze-MBA zithatha ixesha elingakanani ukugqiba?
Kuxhomekeka ekubeni yeyiphi inkqubo oyikhethayo. Ngelixa idigri ekwi-Intanethi inokuthatha kangangeenyanga ezingama-48 (eKelley) okanye kwiinyanga ezili-12 (eHough), uninzi lweenkqubo ziwela ndaweni ithile embindini.
Ngokomndilili, unokulindela ukuchitha imali kwiinyanga ezingama-24, okanye iminyaka emibini, ukufumana isidanga sakho kwi-intanethi. Ukuba uyakwazi ukuthatha iiklasi ezininzi kwisemester nganye, ungalifutshane eli xesha kwiinkqubo ezininzi.
Nangona kunjalo, ukuba unolunye uxanduva, njengomsebenzi osisigxina okanye uxanduva losapho, kuya kufuneka uthathe iiklasi ezimbalwa kwisemester nganye kwaye uchithe ixesha elide ukufumana idigri yakho.
Ukukhetha ixesha lokugqitywa kuyahluka kakhulu ngokwenkqubo, ke qiniseka ukuba wenza uphando lwakho ngaphambi kokuba ubhalise!
Zeziphi iintlobo zeekhosi ze-MBA ezikhoyo?
Ngelixa i-MBA ekwi-Intanethi ijolise ikakhulu kwiseti yeekhosi ezisetyenziswayo kwimisebenzi yeshishini ngokubanzi, abanye bavumela abafundi ukuba bagxile okanye babaluleke kakhulu kwicandelo elithile. Oku kunokubandakanya:
Ukuba kubalulekile kuwe ukuba ulandele isidanga esikhethekileyo okanye uthathe izifundo kwenye okanye ezingaphezulu kwezi ndawo, kubalulekile ukuba uphonononge ikharityhulamu ezithunyelwa zizikolo zabafundi be-MBA ezikwi-Intanethi.
Umzekelo, abafundi be-MBA abakwi-Intanethi kwiminyaka emibini kwinkqubo ye-Intanethi eHough bayacelwa ukuba bathathe izifundo zokwenza imali, ukubhala ngobuchule kunye nonxibelelwano, indlela yokuziphatha kombutho, kunye neendawo ezisibhozo ezongezelelweyo.
Nangona kunjalo, banokukhetha kwizinto ezahlukeneyo zokukhetha iikhosi ezimbini ezongezelelweyo, kubandakanya intshayelelo kwiiNdawo zokuThengisa kunye nokuThengisa kwiShishini ukuya kwishishini.
Kwangokunjalo, abafundi beKelley MBA banokukhetha kwii-majors ezisixhenxe: isicwangciso kunye nobunkokeli, uhlalutyo lweshishini, ezemali, ulawulo lwetekhnoloji yedijithali, ukuthengisa, ukuhanjiswa kwenkonzo kunye nokusebenza, ukurhweba, kunye nokuyila izinto ezintsha.
Zivunywa njani iiNkqubo zeMBA ezikwi-Intanethi?
Ukwamkelwa luhlobo lokujonga kwakhona oluqinisekisa iinkqubo zemfundo ukuhlangabezana nemigangatho esemgangathweni esekwe kakuhle. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba inkqubo ye-MBA ekwi-intanethi iqinisekisiwe ngaphambi kokuba ubhalise, njengoko iinkqubo ezingavunyelwanga zinexabiso eliphantsi kakhulu kwikhondo lakho lomsebenzi.
Iiarhente ezizimeleyo zokuphononongwa zijonga kwakhona iinkqubo ze-MBA ze-Intanethi ukuze zivume. Iiarhente ezintathu ziyakwenza oku.
Ezi zezi: iBhunga loQinisekiso lweZikolo zeNkqubo kunye neNkqubo (i-ACBSP), iBhunga leZiko lokuQinisekiswa kwaMazwe ngaMazwe lezeMfundo ngezoShishino (IACBE), kunye noMbutho ukuPhucula iZikolo zeKholeji zoShishino (AACSB); UMbutho ukuqhubela phambili iZikolo zoShishino zeeKholeji zezona zikhulu kwezi.
Umbutho wokuPhucula iZikolo eziDibeneyo zoShishino uvumile zonke iinkqubo ezidweliswe apha ngasentla.
Kutheni le nto kufuneka ndibhalise kwiNkqubo ye-MBA?
Ngenxa yokuba bejolise kubantu esele benamava omsebenzi obalulekileyo, kunokuba lula ukugxotha iinkqubo ze-MBA njengezingeyomfuneko. Nangona kunjalo, ukugqiba inkqubo ye-MBA kunezibonelelo ezininzi kubomi bakho bobungcali.
Ukufumana eli nqanaba kunokukunika okuninzi ngakumbi Ukuguquguquka kwekhondo lomsebenzi . Ukuba uzimisele ukulandela ulawulo okanye ukubonisana ngomsebenzi, i-master's yinto enkulu yokudibanisa-kwaye ihlala ifuneka. Kwiinkalo ezininzi, njengeenkonzo zemali, unokufumanisa ukuba ubetha isilingi somsebenzi ngaphandle kwenkosi.
Kwiinkqubo eziphambili ze-intanethi, abaphumelele kwi-MBA bafumana ukwanda kobubanzi bolwazi . Uya kuthatha izifundo kwiindawo ezahlukeneyo, ukusuka kwezemali ukuya ekubhaleni, ezokwakha kwisiseko solwazi osele usakhele ngamava akho omsebenzi.
Okokugqibela, iinkqubo ze-MBA zikunika izandla-kumava kwishishini ngoqeqesho kunye namathuba okufunda ngokuzimeleyo. Esi sesinye sezizathu zokufuna inethiwekhi elungileyo yealumni kubalulekile: oku kuhlala kulapho inkqubo yoqeqesho kunye namava omsebenzi avela khona, ukongeza kwimisebenzi yabafundi abaphumelele kwi-MBA!
Ngaba ukugqiba ikhosi ye-MBA kuya kundinceda ndikhusele umsebenzi olungileyo?
Ngokuqinisekileyo unakho — kodwa hayi indlela olunge ngayo loo msebenzi kuxhomekeke kwinto oyikhangelayo kwikhondo lomsebenzi!
Kukho imisebenzi, ngakumbi kulawulo nasekubonisaneni, efuna ukuba abafaki-zicelo babe nale migangatho. Naxa usenza i-MBA kwi-intanethi, uya kuba ulungele ukufaka isicelo sale misebenzi.
Uxinzelelo lwakho ngaphakathi kwenkqubo yakho inokuninzi okunokukwenza ngamathuba amakhondo omsebenzi anokubakho emva koko. Imivuzo yemisebenzi eyahlukeneyo iyahluka kakhulu. Nantsi umfanekiso okhawulezayo wento onokuyilindela ukuyifumana ngokomndilili ngomzi mveliso emva kokuthweswa isidanga kwinkqubo ye-MBA yexesha elizeleyo, ngokwe Iindaba zeU.S. kunye neNgxelo yeHlabathi :
Ukubonisana: $ 140,187
Iinkonzo zeMali: $ 130,001
IThekhnoloji: $ 120,784
Ukuthengiswa kwezindlu: $ 112,086
Ukuvelisa: $ 102,867
Izibonelelo zabasebenzi: $ 92,046
Ungenzi nzuzo: $ 86,840
Inye into ebalulekileyo yokuvavanya inkqubo ye-MBA ekwi-Intanethi ngamathuba ayo othungelwano. Izikolo ezinee-alumni zonxibelelwano eziqinileyo zihlala zinamazinga okuphumelela aphezulu ekufumaneni ingqesho enomvuzo ophezulu kwabo baphumeleleyo.
Ngaba iNkampani yam iya kuHlawula ukuThatha ikhosi ye-MBA?
Abanye baya kuthi. Kuxhomekeke ngokupheleleyo kwinkampani yakho. Ukubanjwa, ewe, kukuba iinkampani zinokufuna ukuba uqhubeke ubasebenzele ixesha elimiselweyo emva kokuba ugqibe isidanga sakho, ke kufanelekile ukuba ujonge kumathuba okukhula ngaphambi kokuthatha imali yokufunda!
Ngaba iNkampani yam iya kundinyusa okanye indinike uMvuzo ukuba ndigqibe ikhosi ye-MBA?
Kwakhona, ezinye ziya kuthi, kodwa iinkampani ezahlukeneyo zinemigaqo-nkqubo eyahlukeneyo. Kwiinkampani ezininzi, i-master's yibhonasi okanye kwanemfuno yezikhundla zolawulo, ke kubalulekile ukuphanda inkampani yakho ngaphambi kokwenza ukuzibophelela.
Jonga isebe lezabasebenzi ukuze ufumanise ukuba ngawaphi amathuba emisebenzi kunye nezibonelelo zemali onokuzilindela emva kokugqiba isidanga sakho. Qiniseka ukuba uqinisekile ukuba ngaba ezi ziqinisekisiwe, nokuba zixhomekeke ekusebenzeni kwakho, okanye nokuba zinokwenzeka nje.
Iinkqubo ze-MBA eziPhezulu kwi-Intanethi: Kukuthatha
Owona Mlawuli oPhezulu woLawulo lwezoShishino kwi-Intanethi ngulowo wakha isiseko solwazi lwakho kububanzi nobunzulu ngelixa usandisa amathuba akho okufumana umvuzo kunye namathuba omsebenzi. Ngenxa yoku, kubalulekile ukuvavanya iinkqubo zekharityhulamu yazo, iindleko, amandla enethiwekhi, kunye nokuzinikela kwexesha.
Iinkqubo ezingcono ziya kuhlala zikulungele ukubonelela ngolu lwazi. Umzekelo, inkqubo efana neKelley School yeShishini kwi-intanethi inkosi iphambili malunga neendleko zayo kunye nomyinge wokuqala womvuzo wabafundi ukuze uvavanye ngokufanelekileyo izibonelelo zokuzimasa.
Ngaba uyafuna ukulandela i-MBA yakho ekwi-intanethi? Zeziphi iiyunivesithi ocinga ngazo?
Uphengululo kunye neenkcazo ezipapashwe apha zezo zomxhasi kwaye azibonisi mgaqo-nkqubo osemthethweni, isikhundla okanye izimvo zaBabukeli.
IHulk Hogan Ithetha ngobungakanani bePenis, uMdumo kunye nokuNgcatshiswa Ngexesha loBungqina
Ukutsha: Umyalezo otyhafileyo oSuka kuLitye eliDala uye kuBatshayi abatsha bePot
A.J. Ukuza okwesibini okungenakwenzeka kukaSoprano
Iikonsathi 'zeMidlalo yeTrone' zezona ziQhelekileyo zeTreyila yeXesha lesi-7
ividiyo yokuqala ye-youtube ukuya kwisigidi esi-1
iinkampani eziphezulu zokukhusela isazisi
eyona nto iphambili ekunciphiseni ukutya kwamadoda
Hillary clinton uzakuphumelela ubongameli
manchester ngaselwandle entsha yorker
UDavid blaine kunye noJosie maran
I-100% isimahla yokujonga irekhodi lolwaphulo-mthetho